Ahụike na Mma Mma Franchise maka Azụmaahịa | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Ahụike na Mma Mma Franchises
Mma Franchises Mma na Mma
Ahụike na Mma kacha mma Franchises
Franchises Health & Mma
N'afọ ndị gara aga a na-achọsi ike maka ọrụ ahụike & ọgwụgwọ mma. Ebe ọ bụ na ụbọchị ndị a, ndị mmadụ achọghị ịchọ mma ọfụma, ha chọrọ iyi kachasị mma. Yabụ taa, m ga-edepụta ụfọdụ ihe dị n'okpuru ka m gosipụtara gị ikike zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụike & ịma mma nwere ma ugbu a ọ nwere ike ịbụ oge kwesịrị ekwesị itinye ego ego.
Statistics gburugburu Health & Mma ụlọ ọrụ.
Anyị ga-edepụta ọnụọgụ ole na ole gburugburu ụlọ ọrụ ahụike & ịma mma anakọtara site na afọ ndị gara aga. Ebumnuche anyị bụ ime ka obi sie onye ọ bụla na-achọ itinye ego na nlekọta ahụike & ịma mma mma. N'ihi na uto na-eto kwa afọ na-egosi na ọ bụ ụlọ ọrụ na-atọ ụtọ isonyere.
Onye ọ bụla na-emefu ihe dịka $ 113 kwa afọ na ụdị ọgwụgwọ onwe ya ma ọ bụ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ịma mma.
Ihu n'ahịa ahia ahụ atụmanya nke amụma ahụ bụ $ 20m n'ụwa niile.
Na 2018, nlekọta anụ ahụ bụ ngalaba kachasị, na-aza ihe dịka pasent 39 nke ahịa ụwa.
Ngwa ahịa nlekọta ntutu mere ihe ruru pasent 21 ọzọ, ebe ndị mejupụtara emejupụtara pasent 19 na 2018.
Onyinye mejupụtara ahịa ịchọ mma n'ụwa niile bụ 40% buru ibu.
O doro anya na enwere nnukwu choro na ngalaba ahuike na ịma mma. Ugbu a bụ oge zuru oke iji malite ọgwụ nlekọta ahụike na ịma mma.
Kedu ihe ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi maka ụlọ ọrụ ahụ ike & ịma mma?
N'ozuzu ya, ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi ahụike na ụlọ ọrụ ahụike mara mma bụ ohere dị oke mma nke nwere ezigbo ndị ahịa na ndị ahịa ịchọrọ ị kpọsaa n'etiti ndị otu agadi. N'ihi na achọtara ha ka ha na-emefu kwa izu na kwa afọ na ngwaahịa na ọgwụgwọ ndị mara mma. Yabụ ihe ị ga - ewepụ ọnụ ọgụgụ ndị a bụ na ụlọ ọrụ na-egosipụtakarị ihe ịrịba ama nke uto akụ na ụba, a na-atụkwa amụma dị oke mma maka onye ọ bụla nọ na mpaghara mma ma ọ bụ nke ejiji.
Kedụ ụdị dị iche iche mma ọhụụ?
Enwere ụdị abụọ na-abanye na ngalaba ịma mma. Na mbu enwere ulo oru ejiji na - eweta otutu ego kwa afo maka ihe dika ngwa, uwe, iru. ngwaahịa dị ka ndị a na ndị ọzọ. Nke abuo na have nwere ulo oru ima-nma nke bu ihe ahia dika ihe ndi ozo, ntutu isi, ihe ndi ozo di iche-iche. Yabụ ị ga-ahọrọ nke ị chere ga-akacha mma na ọrụ gị. Iji maa atụ ma ọ bụrụ n’inwe akụkọ ihe mere eme n’ichepụta ụlọ ọrụ na-emepụta ọmarịcha mma nwere ike ịmasị gị karịa maka ọrụ ọrụ.
Choo ezigbo njikwa mara mma na Franchiseek International.